Nepali Rajneeti | ‘खुट्टाले लागे माफ गरिदिनुस् है दिदी’ विश्वविद्यालयको पढाइ पूरा गर्न पठाओ राइडिङमा, सृजना भन्छिन् – मानवता हराएको रहेनछ
‘खुट्टाले लागे माफ गरिदिनुस् है दिदी’ विश्वविद्यालयको पढाइ पूरा गर्न पठाओ राइडिङमा, सृजना भन्छिन् – मानवता हराएको रहेनछ
बैसाख १५, २०७८ बुधबार १३१ पटक हेरिएको
प्रष्ट विचार र इमानदारीता सृजनाको परिचय हुन् । छोरी, बुहारी, श्रीमती अनि आमा, सबै भूमिकासँगै चल्छ सृजनाको व्यावसायिक जीवन । कुनै समय अध्यापन पेसामा सक्रिय सृजना परिवार र आफ्नो भविष्य सुधार्न भन्दै वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई पनि पुगिन् ।
घरपरिवार अनि सन्तानसँग टाढा रहेर कहाँ सन्तुष्टि मिल्थ्यो र ! परिवार अनि सन्तानका लागि फेरि उनले आफ्नो यात्रालाई मोड्नु पर्‍याे अर्थात् फेरि नेपाल फर्किनु पर्‍याे । सन्तानका लागि वैदेशिक रोजगारी त्यागेर नेपाल फर्किएको सृजना बताउँछिन् ।
सृजना विगत डेढ वर्षदेखि पठाओमा आबद्ध छिन् । रोजीरोटीका लागि मात्रै होइन, अध्ययन र परिवारका लागि पनि समय दिन सकिने भएकाले पठाओलाई मुख्य पेसा बनाएको उनी बताउँछिन् । पठाओले एक लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी मात्रै दिएको छैन, काठमाडौँजस्ता सहरमा सार्वजनिक यातायात र ट्याक्सीमा हुने असुरक्षा र जथाभावी भाडा असुलीबाट यात्रुले मुक्ति पनि पाएका छन् ।
यात्रा गर्न सहज र निश्चित भाडा दरले आज पठाओ, टुटल अनि सवारीमा जस्ता राइडिङ सेयरिङ एपले बजार लिँदै छन् । मात्र राज्यले यस्ता व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहेको सृजना बताउँछिन् ।
कतिपयले ‘कस्तो विस्तारै चलाएको ? हुन त जातैले पाको…’ भनेको सुन्दा भने निकै चित्त दुख्छ सृजनालाई । एक त काठमाडौँको सडक, त्यसमाथि ट्राफिक अनि यात्रीलाई सकुशल गन्तव्यमा पुर्‍याउनुपर्ने अवस्थालाई धेरैले बुझे पनि कोही कोहीले भने अलि नबुझ्दा चित्त दुख्छ । तर सबैको स्वभाव एकै हुँदैन भन्ने ठानेर सामान्य रुपमा लिने गरेको सृजना बताउँछिन् ।
महिला पठाओ राइडरलाई धेरैले प्रोत्साहित गर्छन् । कतिले निकै इज्जत पनि दिन्छन् । सृजनाले ४ जना मादक पदार्थ (अल्कोहल) सेवन गरेका यात्रीलाई पनि सर्भिस दिइन् । आफूले मादक पदार्थ सेवन गरेको कुरा ती यात्रीहरुले सुरुमै सृजनालाई जानकारी गराए ।
सृजनालाई निकै हार्दिकताका साथ ‘दिदी मैले अल्कोहल सेवन गरेको छु, मैले दिएको लोकेशनमा झारिदिनुहोला’ भने । उनीहरुको इमानदारिता देखेर सृजनालाई कत्ति पनि डर लागेन र गन्तव्यसम्म पुर्‍याएको उनी बताउँछिन् ।
सृजनाले अल्कोहल सेवन गर्ने यात्रीसँगको रमाइलो अनुभव पनि यसरी सुनाइन्– ‘पठाओ राइडिङ सुरु गरेदेखि ४ जना अल्कोहल सेवन गरेका यात्रुलाई मैले गन्तव्यसम्म पुर्‍याएँ । जसमा ३ जना अलि सानो उमेरका भाइहरु हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले दिदी मैले अल्कोहल लिएको छु, अप्ठ्यारो नमानिदिनु है भन्नुभयो । त्यति मात्र होइन खुट्टा लागे माफ गरिदिनु है दिदी भन्दै स्कुटरमा चढ्नु अगाडि मेरो छुट्टा ढोग्नु भयो । यसले मलाई मानवता यहाँ जिउँदै रहेछ भन्ने महसुस गरायो ।’
राइडिङमा लागेपछि सृजनासँग थोरै तीता र धेरै मीठा अनुभव छन् । राइडरले कस्ता समस्या झेल्नुपर्छ ? महिनावारी हुँदा राइडिङ कति सहज छ ? यस्ता प्रश्न प्रायः महिला यात्रीहरूले सोध्ने गरेको सृजना सुनाउँछिन् । कोही कोही पुरुष यात्रीले पनि सोध्ने गरेको सृजना बताउँछिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘एकजना पुरुष यात्रीले त स्कुटरमा चढेदेखि धन्यवाद भन्न थाल्नुभएको, झर्दासम्म पनि धन्यवादको धन्यवाद भन्नुभयो । त्यतिबेला उहाँको हार्दिकताले निकै खुसी दिएको थियो ।’